Wasiirka kalluumaysiga ee Somaliya oo Qaramada Midoobey u gudbinaya qoraal ku saabsan xuduudda badda Somaliya. – Radio Daljir
Wasiirka kalluumaysiga ee Somaliya oo Qaramada Midoobey u gudbinaya qoraal ku saabsan xuduudda badda Somaliya.
Muqdisho, May, 05 – Wasiirka kalluumaysiga iyo khayraadka badda ee dawladda federalka Maxamed Macallin Xassan ayaa maanta u gudbiyey golaha wasiiradda warbixir la xiriirta xuduudda badaha Somaliya, golaha oo maanta shirk u yeeshay magaalada Muqdisho ayaa dhinaca kalena magacaabay taliye ciidan iyo agaasimeyaal, waxaana ay goluhu soo saareen war saxaafadeedkan hoose.
(Muqdisho ? Khamiis, 05 May 2011) Shirkii caadiga ahaa oo ay Golaha Wasiirada Xukuumadda FKMG ah yeesheen maanta oo uu shir guddoominayey Ra?iisul Wasaaraha Soomaaliya Mudane Mohamed Abdullahi Mohamed (Farmajo) ayaa looga hadlay arrimo dhowr ah oo ay ka mid yihiin warbixin laga dhageystey Wasiirka Kalluumeysiga, Kheyraadka Badda iyo Bey?ada, Mudane Mohamed Moalin Hasssan oo ku saabsaneyd Xadeynta Badda Soomaaliya. Sidoo kale shirkan waxaa lagu magacaabay Taliyaha Ciidanka Asluubta Soomaaliyeed, iyo Agaasimeyaasha Guud ee Wasaaradaha Caafimaadka iyo Arrimaha Gudaha & Amniga Qaranka.
Wasiirka Wasaaradda Kalluumeysiga, Kheyraadka Badda iyo Bey?ada oo dhowaan ka soo laabtey safar shaqo ayaa Golaha Wasiirada siiyey warbixin la xiriirta natiijadii iyo guushii ka soo hoyatay safarkiisa. Haddaba waxaan ka codsaneyaa Mudane Mohamed Moalin Hassan inuu warbixintaas noo faahfaahiyo:
Dokumentigan iyo khariidooyinka la socda waxaa lagu soo daabaci doonaa websiteyada QM iyo hay?adaha kale ee caalamiga ah, sida FAO.
Golaha Wasiirada ayaa magacaabay mas?uuliyiintan: